नेपालका चार चुरुङ्गि ! जाडो छल्न भारत तिर झर्दै ! – Life Nepali
नेपालका चार चुरुङ्गि ! जाडो छल्न भारत तिर झर्दै !
जाजरकोट — जाडो बढेपछि साइबेरियाबाट सारस प्रजातीको ‘कर्‍’याङ कु’रुङ’ नेपाल हुँदै भारत प्रवेश गरेका छन् । ‘क’र्‍याङ कु’रुङ’ भारतको राजस्थानको केचन गाउँ र गुजरातको किच गाउँ सिमसार क्षेत्रमा जाडो मौसम बिताउँछ । भारत प्रवेश गर्ने क्र’ममा मौसम ख’राब भए अपर मुस्ताङ, काली गण्डकी र भेरी करिडोरमा बास बस्ने गरेको चराविद् कृष्ण भूसाल बताउँछन् । असोज १२ गतेदेखि पन्छीविद् मित्र पाण्डे र हिरुलाल डंगौराको नेतृत्वमा माथिल्लो मुस्ताङमा अध्ययन टोली बसेको छ । उक्त टोलीले साइबेरियाबाट उडेर नेपाल हुँदै भारत जाने यी चराहरुको एक महिने गणना गर्ने नेपाल पन्छी संरक्षण संघ (विसिएन)ले जनाएको छ ।
यो प्रजातीको सारस विश्वमा साढे २ लाख रहेको अनुमान छ । मध्याह्नदेखि अपरमुस्ताङमा वेगले हावा चल्ने भएकोले रुस र मंगोलियाबाट उडेका चराहरु उक्त समयभित्रै अपरमुस्ताङ कट्नु पर्ने हुन्छ । असोज २० गते ११ बजे ठूला ६ समूह मुस्ताङ हुँदै भेरी नदी करिडोर हुँदै भारत पसे । कालीगण्डकी करिडोरमा मौसम बिग्रिएपछि माथिल्लो डोल्पा हुँदै भेरी करिडोर पसेको विसिएनका निर्देशक कृष्ण भुसालले बताए । साइबेरियाबाट ‘क’र्‍याङ कु’रुङ’ भित्रिने मुख्य आकाशमार्ग कालीगण्डकी नै हो । त्यसपछि ठूलोभेरी र कर्णाली नदी ।
अध्ययनकर्ता पाण्डेका अनुसार मंगोलिया, चीनको तिब्बत हुँदै माथिल्लो मुस्ताङ र कालिगण्डकी उपत्यकामा समूहमा भित्रिने ‘कर्‍याङकुरुङ’ मौसम बिग्रेको बेला मात्रै नेपालका नदी किनारहरुमा बास बस्थे र अर्को दिन भारतको गुजरात र राजस्थानतिर लाग्थे ।संकटापन्न अवस्थामा नभए पनि यो चराको अहिलेसम्म विस्तृत अध्ययन भएको छैन । ‘बीसिएनले गत २०७३ साल देखि सुरु गरेको ५ वर्षे अध्ययन पूरा हुँदैछ’ विसिएनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुसालले भने । जाडो सुरु हुनुअघि मंगोलियादेखि उड्न सुरु गर्ने ‘कर्‍याङकुरुङ’ चीन, तिब्बत, माथिल्लो मुस्ताङ, धौलागिरि तथा निलगिरि हुँदै राजस्थानको किचनगाउँ र गुजरातको किच जाने गरेको छ । भारतका किसानहरुले ‘कर्‍याङकुरुङ’लाई औधी माया गर्छन् ।
‘वर्षातमा बच्चा हुर्काएर जाडो छल्न बथानका बथान ‘कर्‍याङकुरुङ’ राजस्थान र गुजरात जान्छन्’ भुसालले भने, ‘बच्चा कोरल्न भने आफ्नै बासस्थान फर्कन्छन् । असोज–कात्तिक (सेप्टेम्बर-अक्टोम्बर) जाडो छल्न बसाइँ सर्ने ती प्रजातिका सारस काजकिस्तान, अफगानिस्तान हुँदैँ वैशाख–जेठ (अप्रिल–मे) मा फेरि मंगोलिया, रुसतिर फर्कन्छन् । ठूलो समूहमा फर्कंदैन कर्‍याङ कुरुङ’अफ्रिका, टर्कीको एटलास माउन्टेन, काजकिस्तान, चीन, रुसमा पाइन्छ ।दुर्लभ र नेपालको वन्यजन्तु ऐनद्वारा संरक्षित पन्छी सारस विश्वकै सबैभन्दा उचाई ७ हजार ९ सय मिटरसम्म उड्न सक्छ ।
Previous कु’कुरले बडो फूर्तिका साथ हातीलाई सोध्यो ! हैन ए हाती, तिमी त ग’र्भवती भएकि होइन ?
Next रिठ्ठे भिरमा ऐना भित्र लु’केको ड’रला’ग्दो रहस्य: र’हश्यमय भीरले कसरि नि’ल्यो हजारौ यात्रु ? हेरौ भिडियो !
महरा _रोशनी शाही संबन्धमा नयाँ खुलासा
55 mins ago Life Nepali
गैंडाकोटमा बिहेकै दिन ब्युटीपार्लर हिँडेकी बेहुली गहना लिएर बे,पत्ता, बेहुला दुखि हुँदै आए मिडियामा
”श्रीमती र साली लिएर कतै जाँ’दै थिए, केही बेरमै उ’नकै आँखा अगाडी श्री’मती र सालीलाई”
यो भन्दा त राजाहरू हुँदा थियो नि एउटा शान, अहिले त शान पनि छैन, मान पनि छैन,प्रचण्डले यसरी लिए राष्ट्रपतिको हुर्मत
यिनै हुन् आफनै गर्भवती श्रीमतिलाई मृत्युको मुखमा पुर्याएर फरार भएका श्रीमान
बेलायतमा साइकल दु’र्घ’टनामा परी सधैंका लागि अस्ताए ३४ बर्षिय बद्री